इन्टरनेट संगको गुनासो "वी किल्ड इन्टरनेट" | Hamro Patro
दिउँसोको ०२ : २०
आजभोली जोकोही पनि यूट्यूबर भएका छन् अनि प्रदुशित दिमागका साथ भाइरल बन्ने भिडियोको शिकार गरिरहेका हुन्छन् । केही बिश्वप्रसिद्ध भ्लगरले भि ब्लगरले महँगा गाडी छेउमा राखेर बाटामा हिँडेका केटीहरुलाई डेट जान प्रस्ताव गरेका भिडियोहरु लगायत अझै केही अश्लिल प्रस्ताव राखेका भिडियोहरु सर्वाधिक रुचाइएका हुन् ।
प्रयाकं भिडियोहरु को बिगबिगी भएको संसार छ । यहाँ कतिबेला कहाँ कुन यूट्यूबरले हातको क्यामरा भएको फोनले के कुरा खिचेर अनि के भाइरल भइदिन्छ हामीलाई थाहै हुन्न ? भिडियोले रातारात हिट अनि रातारात फ्लप, कसैको जिवन बन्दछ अनि कत्तिको जिवन पग्लन्छ, इन्टरनेटको तापक्रम अचम्मको छ । बिश्वका कुनाहरु जोड्ने अनि घटाउने क्रममा इन्टरनेटले कत्ति नियम तोडेको छ अनि गोपनियता हनन गरेको छ, कुनै देश अनि सिस्टमसंग लेखाजोखा छैन् । हिट हुन अनि भिडियो क्लीकको अनुसारका पैसा पाउने भएर झुक्कयाउने टाइटल, अफवाह अनि भड्कीला सामाग्रीहरु व्याप्त हुन्छन् । टीकाथलीको भुत देखि थापाथलीको दुर्घटनासम्म इन्टरनेटको सागरमा आआफ्नै हिसाब अनि कथनमा प्रवाह भइरहेका छन् । इन्टरनेट एउटा यस्तो खेलमैदान भएको छ जहाँ करोडौं बालबालीकाहरु आआफ्ना अधिकांश समय व्यतित गर्दछन् । बालबालीकाको बाल्यकालका अनुभव अनि बाहीरी क्रियाकलापदेखि मान्छेहरुको चियागफसम्म इन्टरनेटको महासागरमा बिलाँउदै गएको छ । पानीपर्दा भिजिन्छ, लडिन्छ लगायत अन्य बिभिन्न अनुभवहरु इन्टरनेट मार्फत हाम्रा केटाकेटीले थियोरिकल हिसाबमा सिकीसकेका हुन्छन् । अब त प्रयोगात्मक अनि जिवनका दिनहरुमा खेलेर, अभ्यास गरेर नै सिक्ने चलन पनि हरायो । गाई पनि भिडियोमा हेरेर सिकेका पुस्ताले भोली लक्ष्मीपुजा गरे भनें स्क्रीननै पुज्ने त होलान् ? इन्टरनेटले सभ्यता अनि सस्कारलाई पनि मारिरहेको त छैन ?
स्वतन्त्रतासंग इन्टरनेट पहुँचको वकालत भइरहँदा सबैभन्दा धेरै बिकाउ अनि शारीरिक आशक्तिका सामाग्री इन्टरनेट मै छ । महिलाहरुलाई शारीरिक बनौट अनि कपडाका आधारमा इन्टरनेटले शोकेस गरेको हुन्छ, नपत्याए हेरौं न सर्वाधिक हेरिएका भिडियोहरु अनि व्लगहरु , भिडियो अनि चित्रहरुका अन्तरकुन्तर नै शारीरिक प्रदर्शनको लम्पट भएको छ । अनि यस्ता सामाग्रीहरुका अनुशासीत दर्शक छन् आँउदा पुस्ताहरु । हरेक कन्टेन्टमा पुरुष अनि महिलाहरुलाई सेक्सुलाइज गरेर इन्टरनेटले प्रदुशनको पराकाष्टा पार गरेको छ ।
आजभोली जोकोही पनि यूट्यूबर भएका छन् अनि प्रदुशित दिमागका साथ भाइरल बन्ने भिडियोको शिकार गरिरहेका हुन्छन् । केही बिश्वप्रसिद्ध भ्लगरले भि ब्लगरले महँगा गाडी छेउमा राखेर बाटामा हिँडेका केटीहरुलाई डेट जान प्रस्ताव गरेका भिडियोहरु लगायत अझै केही अश्लिल प्रस्ताव राखेका भिडियोहरु सर्वाधिक रुचाइएका हुन् । अब पैसो कमाउन अश्लिलताको सहारा लिएका अगुवाहरुले पछुवाहरु लाई के बाटो देखाँउदै छन् ? करोडौं डलर, करोडौं फलोअर्स अनि केही स्टार भिडियोहरु आज हरेकका सपना भएको छ । सपना नराम्रो हैन तर दायित्व पुरा गर्न पनि पछि नपरौं, तपाईले यूट्यूबका लाइक्स अनि कमेन्टका लागि मात्र भ्रामक अनि उत्तेजनात्मक साम्रगी बनाउन पाउनुहुन्न । हामी केवल लाइक्स, शेयर, कमेन्ट अनि एड सेन्सको पैसोलाई पुरस्कार सम्झन्छौं अनि भुल्दछौं प्रभाव पार्ने सकल तत्वहरु अनि समाजप्रतिको हाम्रो दायित्व । सबै इन्टरनेटका सामाग्री नराम्रा कहाँ छन र ? धेरै प्रेरक अनि एकतामुलक सामाग्रीहरु पनि छ, यस्ता कुराहरु ती क्लीक अनि एड सेन्सका दायरा बाहिर छन्, इन्टरनेटलाई फोहोरी सामाग्री हरुले प्रदुशित नगरौं । प्रस्तुत सामाग्री नास डेलि नामक फेसबुक पेजमा राखिएको भिडियो, वी किल्ड इन्टरनेटको नेपाली परिपेक्ष्य अनुरुपको अनुवाद हो ।
दायित्वबोध गर्दै इन्टरनेट सामाग्री निर्माण अनि प्रस्तुत गरौं अनि हामी सामान्य दर्शक या प्रयोगकर्ताको पनि कर्तव्य निर्वाह गरौं ।